ကားစပယျယာဘဝကနေ ဝိနျ့စိနျရှဆေိုငျပိုငျရှငျ ဘဝရောကျအောငျ ကွိုးစားခဲ့သူ ဦးဝငျးစိနျရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျး – 7Day Update News
ဒီနေ့ ဝိနျ့စိနျကိုတညျထောငျခဲ့သူ ကြှနျမရဲ့အဖိုး ဦးဝငျးစိနျရဲ့ အသကျ ၈၉ နှဈ ပွညျ့မှေးနေ့ အဖိုးရဲ့ငယျဘဝလေးက တျောတျောလေးမကောငျးခဲ့ရှာဘူး ထမငျးတလုတျတောငျ မစားခဲ့ရတဲ့နတှေ့ေ မရမေတှကျနိုငျအောငျပဲတဲ့ အဖိုးအိမျကထှကျလာတော့အသကျ ၁၆နှဈ ပထမဆုံးအလုပျက မန်တလေးကနေ ရှမျးပွညျသှားတဲ့ဘကျသှားတဲ့ကားမှာ ကားစပယျယာလုပျတာ အရမျးအေးတဲ့ဆောငျးတှငျးတှမှော အနှေးထညျတထညျတောငျကောငျးကောငျးမသုံးနိုငျခဲ့တဲ့သူ ကြှနျမတို့သီပေါသှားမယျပွောတော့ သူက သူမလိုကျခငျြဘူးတဲ့ သူအခါခါအလီလီ သှားခဲ့ဖူးတဲ့နရော သူအဲ့နရောရဲ့ အအေးဓာတျကို သူပွနျမခံစားခငျြဘူးတဲ့ နောကျတော့သူရနျကုနျတကျတယျ.. သူ့ဦလေးတယောကျရဲ့အကူညီနဲ့ တိုကျစနျးရှဆေိုငျမှာ ပနျးထိမျဝငျလုပျတယျ ၁၀ နှဈလောကျကွာသှားတယျ သူ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ သူ့မှာမိဘဆှမြေိုးသားခငျြး မရှိဘူးလို့တောငျသူ့ကိုထငျတယျ ။
သူ့မိဘတှကေ ဆငျးရဲ့လှနျးလို့ သူ့ဆီလာစရာ ကားခမရှိဘူး သူမှာလညျးရသမြှ ကဈြကဈြပါအောငျစု့ပွီး အမရေယျ အမရယျကိုထောကျပံ့တယျ အဖိုးကကွိုးစားတယျ ရိုးသားတယျ အဲ့ဒါကွောငျ့ အဖိုးရဲ့ဆရာက ပဲခူးသူလေး ဒျေါရိမျနဲ့ အောငျသှယျပေးပွီး မိဘနရောကနေ နရောခပြေးခဲ့တယျ သူ့မှာ စီးကရကျဘူးတဘူးစာ ရှလေေးစု့မိထားတယျ သူအိမျထောငျပွု့ပွီး မန်တလေးကိုဆငျးလာတယျ သူတတျတဲ့ပညာလေးနဲ့စီးပှားရှာဖို့ အဖိုးက စာသခြောမသငျခဲ့ ရရှာဘူး ဒါပမေယျ့သူနားလညျတာတခုရှိတယျ မှနျမှနျကနျကနျနဲ့ဖွေးဖွေးသာသှား သူတနအေ့ောငျမွငျမယျဆိုတာပဲ ဝိနျ့စိနျက ဆိုငျလေးစဖှငျ့တော့ ဆိုငျကွီးတှအေလြှငျမွနျမလုပျပေးနိုငျတဲ့ အရေးပျေါအထညျလေးတှနေဲ့စခဲ့တယျ ညတှငျးခငျြးလကျစှပျပွီးအောငျလုပျပေးတာတို့ ပွငျထညျလေးတှတေို့နဲ့ပေါ့
အဖိုးရဲ့စတေနာ လကျရာ ပညာကွောငျ့ ဝိနျ့စိနျဟာ တဖွညျးဖွညျးလူသိမြားလာတယျ ၁၀ ပေ x ပေ ၂၀ အခနျးလေးမှာ မိသားစု့ ၅ ယောကျနရောကနေ ပိုကွီးတဲ့အခနျးလေးပွောငျးလာနိုငျတယျ အဲ့ကနေ ပိုကျဆံစု့ အိမျလေးဝယျလာနိုငျတယျ အဖိုးရဲ့ ပထမဆုံးအိမျလေးက အခု့ဆိုငျအမှတျ ၁ ဖှငျ့ထားတဲ့ ၂၈လမျး x ၈၄ လမျးထောငျ့ကအိမျ သူ့မိသားစု့လေးအတှကျအိမျ သူ့ရဲ့လကျသုံးစကားလေးဖွဈတဲ့ မှနျမှနျကနျကနျလုပျကလေးကို လကျကိုငျထားပွီးတော့ ရှဆေိုငျလောကမှာ ရောငျးစြေးဝယျစြေးကို ပထမဆုံး ရှစြေေးကို တရားဝငျရေးပွီးရောငျးတဲ့ ဆိုငျလေးဖွဈလာတယျ ရောငျးရငျဘယျစြေးရမယျ ဝယျရငျဘယျစြေးပေးရမယျဆိုတာမေးစရာမလို ဆိုငျထဲဝငျလိုကျတာနဲ့ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာရေးထားတယျ ဝိနျ့စိနျက ဒါကွောငျ့ယုံကွညျမှု့ပိုရခဲ့တယျ
ဦးကြားကွီးဝငျး မီးလောငျခဲ့စဉျကလညျး အဖိုးက သူ့ဆီအပျထားတဲ့ ရှငှေလေကျဝတျရတနာတှကေို တခု့မကနျြပွနျပေးလို့ဆိုပွီး .. ရနျသူမြိုး ၅ ပါးရနျကွောငျ့ပကျြစီးသှားတာတှတေောငျ ပွနျပေးတယျဆိုပွီး ဝိနျ့စိနျက နာမညျတကျခဲ့ပွနျတယျ တဖွေးဖွေးနဲ့ဝိနျ့စိနျက ပိုပိုပွီးအောငျမွငျလာတယျ အဖအေိမျထောငျကတြော့ အဖိုးက လုပျငနျးကို အဖကေို့ ဦးစီးစခေဲ့ပွီး သူက အကွံပေးနရောမှာနပွေီး အဖကေို့လမျးညှနျခဲ့တယျ အဖိုးက အမွဲတမျးလိုလို ဆိုငျထိုငျတယျ .. စြေးဝယျတှနေဲ့စကားပွောတယျ သူကအမွဲအမှနျအတိုငျးပဲ အကွံတှပေေးတတျသလို မဟုတျမမှနျ စှပျစှဲရငျလညျး စိတျကွီးတတျတယျ ..
တခါတလရှေစြေေး တကျနခြေိနျ စြေးဝယျတှလောဝယျရငျ အဖိုးက အခု့ခြိနျမဝယျနဲ့ မွဝေယျ စြေးပွနျကမြှ ရှဝေယျတို့ဘာတို့ပွောတာ .. တခါတလအေဖိုးကို အဲ့လိုတှမေပွောပါနဲ့ ပွောယူရတယျ .. ဆိုငျကရှကေို မကောငျးဘူးဘာဘူးပွောရငျလညျး သိပျစိတျတိုတာ လူမြားဆီက မတရားသဖွငျ့ တပွားတခပျြတောငျမယူခဲ့ဘူးဆိုပွီး သူစိတျတိုတတျတယျ သူကကြှနျမတို့ကို သိပျပွီး ပညာတတျကွီးတှဖွေဈစခေငျြတာ သူ့မှာကြှနျမတို့က ဘယျလိုနိုငျငံခွားတှမှော စာသှားသငျခဲ့တာ ဘာတှလေုပျနိုငျတာဆိုတာကို သူသိပျဂုဏျယူတာ ငယျငယျကတညျးက ကြောငျးတှဆေိုသူကိုယျတိုငျပို့ သူကိုယျတိုငျကွိုတာ မနကျ ၆ နာရီ တရုတျကြောငျးပို့တာကနစေပွီး ည ၉ နာရီ ကြူရှငျပွီးတဲ့အထိ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးကားဖွဈတဲ့ .. ဂဈြကားကွီးနဲ့အပို့အကွိုလုပျတာ ..
အဖိုးကအမွဲပွောတယျ .. မရှိတဲ့ဒု့က်ခကိုသူကောငျးကောငျးနားလညျတယျ မရှိမှာ သူသိပျကွောကျတယျတဲ့ သူနားလညျတာနဲ့အမြှ သူကိုယျခငျြးစာစိတျအပွညျ့နဲ့ မိဘမဲ့ကြောငျးတှလှေူတယျ လူအိုရုံတှဆေောကျပေးတယျ သူစာမသငျခဲ့ရသမြှ လူမြားတှေ စာတတျအောငျ ဘကကြောငျးတှဆေောကျတယျ စာသငျကြောငျးတှလှေူတယျ .. ဆေးရုံသုံးပစ်စညျးတှေ စကျတှအေကုနျလှူတယျ .. မကျြစိဆေးရုံမှာလညျး ရာသကျပနျလူနာမှတျတမျးစာအုပျ အလှူလေးလုပျထားတယျ
အဖိုးကအဖှားကို သိပျခဈြတာ .. အဖှားက ၁ ဆို သူ ၂ မလုပျဘူး သူ့ဘေးနားမှာနပွေီး အခကျခဲမှနျသမြှကို သူနဲ့အတူရငျဆိုငျပေးခဲ့လို့ သူဒီဘဝရောကျရတာတဲ့ ကြှနျမတို့ အဘိုးကိုအမွဲနောကျနကေစြကားရှိတယျ .. ဦးဝငျးစိနျရဲ့ဘဝမှာ ဒျေါရိမျသာ ၁ ဒျေါရိမျသာ ၂ ဒျေါရိမျသာ ၁ ကနေ ၁၀ထိပဲလို့ အဖိုးကအဲ့လိုသံယောဇဉျကွီးတဲ့သူ စညျးကမျးကွီးတဲ့သူ ကြှနျမအဖိုးဆီက အကွိုကျဆုံးစကားကိုပွောပါဆိုရငျ
အဖငေယျငယျက ဥပုဒျနေ့ နားမယျ အလုပျမလုပျဘူးပွောတော့ အဖိုးက အဲ့ဆိုမငျးဥပုဒျနဆေို့ ထမငျးမစားဘူးပေါ့? ဆိုပွီးပွနျပွောတာပဲ ဒါကြှနျမသိပျလေးစား သိပျမွတျနိုးခဈြခငျရတဲ့ ဝိနျ့စိနျကို အုပျတခပျြသဲတပှငျ့ကနေ စတညျထောငျခဲ့သူ ဖိုးဖိုးဦးဝငျးစိနျရဲ့အကွောငျးပါ (ကြှနျမတို့အိမျမှာ ပုံထဲကအတိုငျး ထမငျးစားတာ သိပျရှားတာနျော ..ဒါဒီနမှေ့ေးနမေ့လို့ တနေ့ အရှကျ ၂ မြိုး အသား ၂ မြိုး ဟငျးရညျပဲ မကုနျတာတှေ ပိုနတောတှကေို အဖိုးရောအဖှားရောကသိပျမုနျးတာ.. လိုသလောကျပဲခကျြစားစခေငျြတာ)
Crd Thiri Swe
ကားစပယ်ယာဘဝကနေ ဝိန့်စိန်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဘဝရောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့သူ ဦးဝင်းစိန်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း
ဒီနေ့ ဝိန့်စိန်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ ကျွန်မရဲ့အဖိုး ဦးဝင်းစိန်ရဲ့ အသက် ၈၉ နှစ် ပြည့်မွေးနေ့ အဖိုးရဲ့ငယ်ဘဝလေးက တော်တော်လေးမကောင်းခဲ့ရှာဘူး ထမင်းတလုတ်တောင် မစားခဲ့ရတဲ့နေ့တွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပဲတဲ့ အဖိုးအိမ်ကထွက်လာတော့အသက် ၁၆နှစ် ပထမဆုံးအလုပ်က မန္တလေးကနေ ရှမ်းပြည်သွားတဲ့ဘက်သွားတဲ့ကားမှာ ကားစပယ်ယာလုပ်တာ အရမ်းအေးတဲ့ဆောင်းတွင်းတွေမှာ အနွေးထည်တထည်တောင်ကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်ခဲ့တဲ့သူ ကျွန်မတို့သီပေါသွားမယ်ပြောတော့ သူက သူမလိုက်ချင်ဘူးတဲ့ သူအခါခါအလီလီ သွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာ သူအဲ့နေရာရဲ့ အအေးဓာတ်ကို သူပြန်မခံစားချင်ဘူးတဲ့ နောက်တော့သူရန်ကုန်တက်တယ်.. သူ့ဦလေးတယောက်ရဲ့အကူညီနဲ့ တိုက်စန်းရွှေဆိုင်မှာ ပန်းထိမ်ဝင်လုပ်တယ် ၁၀ နှစ်လောက်ကြာသွားတယ် သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက သူ့မှာမိဘဆွေမျိုးသားချင်း မရှိဘူးလို့တောင်သူ့ကိုထင်တယ် ။
သူ့မိဘတွေက ဆင်းရဲ့လွန်းလို့ သူ့ဆီလာစရာ ကားခမရှိဘူး သူမှာလည်းရသမျှ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်စု့ပြီး အမေရယ် အမရယ်ကိုထောက်ပံ့တယ် အဖိုးကကြိုးစားတယ် ရိုးသားတယ် အဲ့ဒါကြောင့် အဖိုးရဲ့ဆရာက ပဲခူးသူလေး ဒေါ်ရိမ်နဲ့ အောင်သွယ်ပေးပြီး မိဘနေရာကနေ နေရာချပေးခဲ့တယ် သူ့မှာ စီးကရက်ဘူးတဘူးစာ ရွှေလေးစု့မိထားတယ် သူအိမ်ထောင်ပြု့ပြီး မန္တလေးကိုဆင်းလာတယ် သူတတ်တဲ့ပညာလေးနဲ့စီးပွားရှာဖို့ အဖိုးက စာသေချာမသင်ခဲ့ ရရှာဘူး ဒါပေမယ့်သူနားလည်တာတခုရှိတယ် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြေးဖြေးသာသွား သူတနေ့အောင်မြင်မယ်ဆိုတာပဲ ဝိန့်စိန်က ဆိုင်လေးစဖွင့်တော့ ဆိုင်ကြီးတွေအလျှင်မြန်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်အထည်လေးတွေနဲ့စခဲ့တယ် ညတွင်းချင်းလက်စွပ်ပြီးအောင်လုပ်ပေးတာတို့ ပြင်ထည်လေးတွေတို့နဲ့ပေါ့
အဖိုးရဲ့စေတနာ လက်ရာ ပညာကြောင့် ဝိန့်စိန်ဟာ တဖြည်းဖြည်းလူသိများလာတယ် ၁၀ ပေ x ပေ ၂၀ အခန်းလေးမှာ မိသားစု့ ၅ ယောက်နေရာကနေ ပိုကြီးတဲ့အခန်းလေးပြောင်းလာနိုင်တယ် အဲ့ကနေ ပိုက်ဆံစု့ အိမ်လေးဝယ်လာနိုင်တယ် အဖိုးရဲ့ ပထမဆုံးအိမ်လေးက အခု့ဆိုင်အမှတ် ၁ ဖွင့်ထားတဲ့ ၂၈လမ်း x ၈၄ လမ်းထောင့်ကအိမ် သူ့မိသားစု့လေးအတွက်အိမ် သူ့ရဲ့လက်သုံးစကားလေးဖြစ်တဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ကလေးကို လက်ကိုင်ထားပြီးတော့ ရွှေဆိုင်လောကမှာ ရောင်းဈေးဝယ်ဈေးကို ပထမဆုံး ရွှေဈေးကို တရားဝင်ရေးပြီးရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးဖြစ်လာတယ် ရောင်းရင်ဘယ်ဈေးရမယ် ဝယ်ရင်ဘယ်ဈေးပေးရမယ်ဆိုတာမေးစရာမလို ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာရေးထားတယ် ဝိန့်စိန်က ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှု့ပိုရခဲ့တယ်
ဦးကျားကြီးဝင်း မီးလောင်ခဲ့စဉ်ကလည်း အဖိုးက သူ့ဆီအပ်ထားတဲ့ ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေကို တခု့မကျန်ပြန်ပေးလို့ဆိုပြီး .. ရန်သူမျိုး ၅ ပါးရန်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတာတွေတောင် ပြန်ပေးတယ်ဆိုပြီး ဝိန့်စိန်က နာမည်တက်ခဲ့ပြန်တယ် တဖြေးဖြေးနဲ့ဝိန့်စိန်က ပိုပိုပြီးအောင်မြင်လာတယ် အဖေအိမ်ထောင်ကျတော့ အဖိုးက လုပ်ငန်းကို အဖေ့ကို ဦးစီးစေခဲ့ပြီး သူက အကြံပေးနေရာမှာနေပြီး အဖေ့ကိုလမ်းညွှန်ခဲ့တယ် အဖိုးက အမြဲတမ်းလိုလို ဆိုင်ထိုင်တယ် .. ဈေးဝယ်တွေနဲ့စကားပြောတယ် သူကအမြဲအမှန်အတိုင်းပဲ အကြံတွေပေးတတ်သလို မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲရင်လည်း စိတ်ကြီးတတ်တယ် ..
တခါတလေရွှေဈေး တက်နေချိန် ဈေးဝယ်တွေလာဝယ်ရင် အဖိုးက အခု့ချိန်မဝယ်နဲ့ မြေဝယ် ဈေးပြန်ကျမှ ရွှေဝယ်တို့ဘာတို့ပြောတာ .. တခါတလေအဖိုးကို အဲ့လိုတွေမပြောပါနဲ့ ပြောယူရတယ် .. ဆိုင်ကရွှေကို မကောင်းဘူးဘာဘူးပြောရင်လည်း သိပ်စိတ်တိုတာ လူများဆီက မတရားသဖြင့် တပြားတချပ်တောင်မယူခဲ့ဘူးဆိုပြီး သူစိတ်တိုတတ်တယ် သူကကျွန်မတို့ကို သိပ်ပြီး ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်စေချင်တာ သူ့မှာကျွန်မတို့က ဘယ်လိုနိုင်ငံခြားတွေမှာ စာသွားသင်ခဲ့တာ ဘာတွေလုပ်နိုင်တာဆိုတာကို သူသိပ်ဂုဏ်ယူတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းတွေဆိုသူကိုယ်တိုင်ပို့ သူကိုယ်တိုင်ကြိုတာ မနက် ၆ နာရီ တရုတ်ကျောင်းပို့တာကနေစပြီး ည ၉ နာရီ ကျူရှင်ပြီးတဲ့အထိ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးကားဖြစ်တဲ့ .. ဂျစ်ကားကြီးနဲ့အပို့အကြိုလုပ်တာ ..
ဂျစ်ကားစီးရတာကို သိပ်ရှက်ခဲ့တာ .. တော်တော်ဟောင်းနေပြီကို .. ဒါပေမယ့်အဖိုးအတွက်တော့ ဒီကားလေးက သူ့ကို မီးဘေးကကယ်ခဲ့တဲ့ ကားလေး သူ့သား ၁၀ တန်းအောင်လို့ အမှတ်တရပေးခဲ့တဲ့ ကားလေးဖြစ်လို့ အဲ့ကားလေးကို မရောင်းရက်ခဲ့ဘူး
အဖိုးကအမြဲပြောတယ် .. မရှိတဲ့ဒု့က္ခကိုသူကောင်းကောင်းနားလည်တယ် မရှိမှာ သူသိပ်ကြောက်တယ်တဲ့ သူနားလည်တာနဲ့အမျှ သူကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်နဲ့ မိဘမဲ့ကျောင်းတွေလှူတယ် လူအိုရုံတွေဆောက်ပေးတယ် သူစာမသင်ခဲ့ရသမျှ လူများတွေ စာတတ်အောင် ဘကကျောင်းတွေဆောက်တယ် စာသင်ကျောင်းတွေလှူတယ် .. ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေ စက်တွေအကုန်လှူတယ် .. မျက်စိဆေးရုံမှာလည်း ရာသက်ပန်လူနာမှတ်တမ်းစာအုပ် အလှူလေးလုပ်ထားတယ်
အဖိုးကအဖွားကို သိပ်ချစ်တာ .. အဖွားက ၁ ဆို သူ ၂ မလုပ်ဘူး သူ့ဘေးနားမှာနေပြီး အခက်ခဲမှန်သမျှကို သူနဲ့အတူရင်ဆိုင်ပေးခဲ့လို့ သူဒီဘဝရောက်ရတာတဲ့ ကျွန်မတို့ အဘိုးကိုအမြဲနောက်နေကျစကားရှိတယ် .. ဦးဝင်းစိန်ရဲ့ဘဝမှာ ဒေါ်ရိမ်သာ ၁ ဒေါ်ရိမ်သာ ၂ ဒေါ်ရိမ်သာ ၁ ကနေ ၁၀ထိပဲလို့ အဖိုးကအဲ့လိုသံယောဇဉ်ကြီးတဲ့သူ စည်းကမ်းကြီးတဲ့သူ ကျွန်မအဖိုးဆီက အကြိုက်ဆုံးစကားကိုပြောပါဆိုရင်
အဖေငယ်ငယ်က ဥပုဒ်နေ့ နားမယ် အလုပ်မလုပ်ဘူးပြောတော့ အဖိုးက အဲ့ဆိုမင်းဥပုဒ်နေ့ဆို ထမင်းမစားဘူးပေါ့? ဆိုပြီးပြန်ပြောတာပဲ ဒါကျွန်မသိပ်လေးစား သိပ်မြတ်နိုးချစ်ခင်ရတဲ့ ဝိန့်စိန်ကို အုပ်တချပ်သဲတပွင့်ကနေ စတည်ထောင်ခဲ့သူ ဖိုးဖိုးဦးဝင်းစိန်ရဲ့အကြောင်းပါ (ကျွန်မတို့အိမ်မှာ ပုံထဲကအတိုင်း ထမင်းစားတာ သိပ်ရှားတာနော် ..ဒါဒီနေ့မွေးနေ့မလို့ တနေ့ အရွက် ၂ မျိုး အသား ၂ မျိုး ဟင်းရည်ပဲ မကုန်တာတွေ ပိုနေတာတွေကို အဖိုးရောအဖွားရောကသိပ်မုန်းတာ.. လိုသလောက်ပဲချက်စားစေချင်တာ)
ထားဝယျခရိုငျ၊သာယာကုနျးကြေးရှာမှ မကျြလုံး ဝဒေနာရှငျ သမီးလေးအတှကျဝမျးသာစရာသတငျး